Balkans: Mankatoa ny fijoroan’i Kosovo i Makedonia sy i Montenegro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2018 3:35 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, srpski, 繁體中文, 简体中文, English
(Fanamarihana: tamin'ny 15 oktobra 2008 ny lahatsoratra teny anglisy)
Tamin'ny 9 Oktobra, ankatoavin'i Montenegro sy i Makedonia ny fahaleovantenan'i Kosovo.
Nanamarika i Douglas Muir avy ao amin'ny A Fistful of Euros fa “kisendrasendra, nampitombo ny isan'ny firenena mankatoa ho 50 indrindra izany.” Nofariparitany ny lanjan'ny toe-javatra amin'ny teny ankapobeny:
[…] Firenena madinika i Makedonia sy i Montenegro, saingy misy lanjany lehibe ry zareo satria (1) samy mpifanolobodirindrina amin'i Serbia sy Kosovo ry zareo, (2) ho mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana ry zareo, ary (3) Repoblika Yogoslavy taloha ry zareo. Ka na dia tsy mahagaga aza izany dia mbola mahaliana hatrany. […]
Viktor Markovic avy ao amin'i Belgraded (bilaogy fantatra teo aloha ho Belgrade 2.0) nanolotra amin'ny andrika mampihomehy ny “endrika fohy tamin'izay nitranga sy izay mety hitranga”:
[…] Ankehitriny samy nanapa-kevitra ny hankatoa ny fijoroan'i Kosovo i Montenegro sy i Makedonia. Hamaly amin'ny fankatoavana azy ireo ihany koa angamba i Kosovo. Rehefa eo ihany ry zareo, dia mety hanapa-kevitra amin'ny fankatoavana an'i Ossetia Atsimo sy Abhazia, faritany nanapa-kevitra ny hanambara ny fahaleovantenany manoloana an'i Georgia (Tsy ilay Amerika, fa ilay manakaiky an'i Rosia) amin'ity taona ity. Amin'izay fotoana izay i Kosovo hanohana an'i Rosia amin'ny fanampiana amin'ny fisintahan'i Ossetia Atsimo sy i Abhazia, saingy handiso fanantenana an'i Etazonia sy ny ambiny amin'izao tontolo izao mifanohitra amin'i Rosia izany, saingy hanohana an'i Kosovo, i Montenegro ary i Makedonia amin'ny ezaka ataon-dry zareo ho amin'ny fahaleovantenany. Serbia izao tokony hanohana an'i Georgia satria fantatsika ny hoe ahoana izay anesorana ampaha-tany izany, mety, fa amin'izay fotoana izay isika handiso fanantenana an'i Rosia, namana akaiky antsika indrindra raha eo amin'ny resaka tsy fankatoavana an'i Kosovo. Efa nankatoa ny fijoroan'i Kosovo i Georgia, i Etazonia, saingy tokony tsy nankatoa izany mihitsy i Georgia (ilay firenena), satria hita ao ny faritany misintaka amin'ny firenena. Saingy raha tsy mankatoa izany ry zareo dia handiso fanantenana an'i Etazonia sy ny firenenkafa efa nankatoa azy.
Nilaza i Rosia tamin'ny voalohany fa tsy mety ho an'ny faritany no misintaka, saingy miteny ry zareo fa mety izany izao. Nilaza i Etazonita tamin'ny voalohany fa mety amin'ny faritany iray no misintaka, saingy ankehitriny ry zareo milaza fa zava-dratsy izany ary dia misy tsia-tsia goavana […]
Nandefa izao fanehoan-kevitra izao tao amin'ny lahatsoratr'i Viktor ny mpamaky iray antsoina hoe Owen:
Mihevitra aho fa tsorinao be loatra izy izany.
Namaly i Viktor tamin'ny fanolorana lalana iray “hahatonga ny toe-javatra hisaritaka sy hahaliana bebe kokoa” -izay mety hahatonga an'i Serbia “hanaisotra ny fankatoavany an'i Montenegro sy i Makedonia”:
[…] Tsy haiko hoe mety ho azo atao ve izany, manaisotra ny fankatoavana ny fijoroan'ny fanjakana iray, saingy toa izany no ataontsika handresena lahatra ny firenenkafa efa nanktoa an'i Kosovo ho atao, sa tsy izany? Ka noho izany tokony hanao ho ohatra isika ka hanaisotra ny fankatoavana an'i Makedonia sy i Montenegro. […]
Vitaly avy ao amin'ny The 8th Circle nanamarika ny sasantsasany amin'ny fiantraikan'ny fankatoavan'ireo mpifanolo-bodirindrina amin'i Serbia ny fijoroan'i Kosovo – fifandonana any Montenegro sy ny fandroahana ny ambasadaoron'ny firenena anankiroa hiala an'i Belgrade – saingy nofaranany tamin'ny fanamarihana miabo izany:
Ny fanombanako dia ny fihetsiketseham-panoherana no fanehoana eo noho eo ny haromotana, fa tsy tokony ho lasa olana maharitra, saingy mety hiova izany araka ny amelana ny fahatezerana ho mafy orina ka ho lasa voasokitra ao amin'ny tsiarom-bahoaka. Sa, hitodika any amin'ny hoavy ve ny andaniny sy ny ankilany fa any tsy dia misy antony loatra ny sisintany, rehefa eo ambany fambomban'ny Vondrona Eoropeana?
Jonathan Davis avy ao amin'ny LimbicNutrition Weblog nanoratra fa “manohana an'i Kosovo mahaleotena izy,” mila an'i “Serbia ho ao anatin'ny Vondrona Eoropeana haingana araka izay azo atao” – saingy “leon'ny lainga, fitaka, fihatsarambelatsihy sy fampijaliana” ataon'ny “fiarahan'ny Vondrona Eoropeana/Etazonia/kosovo” izy. Ho azy, tsy hitany hamirapiratra ny fitodidihan-dian'i Makedonia sy i Montenegro :
[…] Ankehitriny, anefa, mila miaina amin'ny fahatezeran'ny mpiara-miombon'antoka ara-barotra lehibe indrindra amin-dry zareo ry zareo sy ny mety ho fikorontanana amin'ny vokatry ny fankatoavan-dry zareo eo amin'ny politika anatiny. […]
Raha nanoratra momba “ny fironan-tsafidy lehibe mankany amin'ny famelana ny fanambin'i Serbia hanohitra ny maha-ara-dalàna an'i Kosovo ao amin'ny Fitsarana Iraisampirenena” izay nialoha ny fankatoavan'i Makedonia sy i Montenegro an'i Kosovo, nanolo-kevitra i Jonathan fa “natao hisy fiantraikany ara-tsaina sy ara-pampielezan-kevitra” ny “drafitra efa niomanana mialoha hanerena ireo firenena kely roa mpifanolo-bodirindrina amin'i Serbia […] hankatoa an'i Kosovo ao anatin'ny iray andro mialoha ny fandatsaham-bato”:
[…] (1) Handrava ny (fanohanana ny) Serba sy (2) hampivily ny maso tsy hitodihan'ny fampitam-baovao manerantany any amin'ny fandresen'i Serbia tao amin'ny Firenena Mikambana ka hampîfantoka ny lazaina ho “fahagagàn'i ” Serbia amin'ny “fivadihan'i” Montenegro sy i Makedonia. […]
Nosoratany ihany koa ny “tohin'ny teti-panorona fanompàna amin'ny faharatrana”:
Ny loka Nobel Fandriampahalemana nomena an'i Martti Ahtisaari, olo-malaza ankahalaina ao Serbia, izay noheverin'ny maro ho pro-albaney mivandravandra sady ilay rangahy nanolotra an'i Kosovo ny fahaleovantenany (tsy ara-dalàna). Nantenaina hatolotra an'i Gao Zhisheng, Shinoa mpanohitra nogadraina izany loka izany, saingy nanapa-kevitra ny hanohy amin'ny fahazarany misy ambadika politika ny komity, ary azo heverina tsara mihitsy ho valin'ny fandresen'i Serbia tao amin'ny Firenena Mikambana. […]